Soo dejisan KMPlayer 4.1.3.3 – Windows – Vessoft
KMPlayer – ciyaaryahan caan ah oo ay taageertaa inta badan audio iyo video qaabab. software waa in la filtarrada gudaha ama dibadda iyo modules in u saamaxaaya in ay furfurmi qabsato loo maqli karo oo ka mid ah goobaha file multimedia shaqeyn karin. KMPlayer leeyahay tiro balaadhan oo ah hawlaha dheeraad ah, sida taageerada Cinwaan, scalability, content Streaming iyo video qabtay by a TV-tuner ama camera. KMPlayer taageertaa inta badan codecs ugu weyn ee loo maqli saxda ah ee files audio iyo video.
ahaanayta debecsan oo ka mid ah guryaha file warbaahinta
Loo maqli of content Streaming
Jiritaanka hargahood oo kala duwan